छ वर्ष अघि सन् २००७ मा यो ब्लग सुरु गर्दा, आजको आफ्नो यो परिचयको कल्पना गरिएको थिएन । आफ्ना स्केच र विश्वविद्यालयको गृहकार्यलाई संग्रह गर्नको लागि सुरु भएको ब्लगले विस्तारै आफ्नो यो परिचय छोडेर, सबैको लागि सबैथोक बन्ने कोशिस गर्यो । सुरुवातका दिनमा रुपेश दाइको निरन्तरको हौसलाले ब्लगलाई निरन्तरता दिएँ, आफ्ना मनमा उब्जिएका सबैकुरा ब्लगमा पोतियो । बिस्तारै फेसबुक र ट्विटरको लोकप्रियता बढ्न थाल्यो, अनि त्यही लहरमा लागियो । ब्लग, फेसबुक र ट्विटरबाट भुपेन्द्र दाइको नजिक पुगियो अनि रुचीको रुपमा रहेको 'सोसल मिडिया' मेरो प्रोफेसनको रुपमा देखापर्यो ।
सोसल मिडियालाई सबैले आफू अनुकुल परिभाषित गरेकाछन् अनि आफू अनुकुल प्रयोग गरेकाछन् । जस्तो कि, पत्रकारिता क्षेत्रमा सोसल मिडियाले क्रान्ति ल्यायो भनिन्छ, अत यसलाई "नागरिक पत्रकारिता" को दर्जा दिइन्छ (अन्य पाटाहरु पनि छन्) । अनि यता डिजिटल मार्केटिङमा पनि सोसल मिडियाले धार नै परिवर्तन गराइदिएकोछ । यसबाट मैले निकालेको निचोड भनेको 'सोसल मिडिया'ले "कम्युनिकेसन"मा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याइदियो ।
इन्टरनेट चलाउनेको पहुँचमा भएको सबैभन्दा सरल र सहज मिडिया भनेको 'सोसल मिडिया' हो, जसबाट सजिलै जो कोही अरुसम्म सजिलै पुग्न सक्छन्, नेटवर्किङ गर्न सक्छन्, आफ्नो परिचय बनाउन सक्छन् । 'सोसल मिडिया'बाटै आफ्नो परिचय बनेको हुँदा, आफूलाई प्रस्तुत गर्नलाई 'सोसल मिडिया' हाम्रो जमानाको सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो भन्ने लाग्छ । सोसल मिडिया भनेको 'सोसल मिडिया' क्षेत्रमा काम गर्नेले मात्र होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले यसबाट धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिनसक्छन् । सोसल मिडियाको फाइदा वा वेफाइदा चाँहि आफ्नो प्रयोगमा भरपर्छ ।
सोसल मिडियाबारेका आफ्ना केही अनुभवहरु 'युवालय'ले विश्व युवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको 'पेचाकुचा' शैलीको कार्यक्रम 'युथ एक्सप्रेस"मा 'सेयर' गरेको थिँए । त्यस अवसरमा बनाएको 'प्रिजेन्टेसन स्लाइड' यहाँ राख्दैछु ।
What does Social Media mean to me? From Aakar Anil
माथिको स्लाइड http://bit.ly/smyuwalaya13 मा गएर हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ । आफ्नो 'क्यारियर/फ्रोफेसन'लाई विचमा राखेर सोसल मिडियाको प्रयोग गर्दा धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिनसकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ ।
Sujan Maharjan August 20, 2013 at 1:51 PM
Dear Anil dai,
Tapai ko slide padera dherai nai kura haru sikne mauka paye. ajai dherai yestai slide ko pratikchya ma chu.
nishant khanal August 20, 2013 at 5:37 PM
and you are one of my inspiration dai :)
shankarmanthami December 17, 2013 at 12:16 AM
दाई म पनि यस्तैमा बर्खर पाइला सार्दै गरेको मान्छे हजुर को सहयोगको खाचो छ है अनि मेरो लिङक variousofblog.blogspot.com सहयोगको अपेछ्यो सहित